Revhitiko 11 | Bhaibheri repaIndaneti | Shanduro Yenyika Itsva
11 Zvino Jehovha akataura naMosesi naAroni, achiti kwavari: 2 “Taurai nevanakomana vaIsraeri, muchiti, ‘Izvi ndizvo zvisikwa zvipenyu zvamungadya+ pamhuka dzose dziri panyika: 3 Pamhuka, zvisikwa zvose zvine mahwanda akaparadzana, zvine mahwanda akatsemuka pakati uye zvinodzeya, ndizvo zvamungadya.+ 4 “‘Idzi chete ndidzo dzamusingafaniri kudya pane dzinodzeya nedzine mahwanda akaparadzana: ngamera, nokuti inodzeya asi haina mahwanda akaparadzana. Iyo haina kuchena kwamuri.+ 5 Uyewo mbira,+ nokuti inodzeya asi haina mahwanda akaparadzana. Iyo haina kuchena kwamuri. 6 Uyewo tsuro,+ nokuti inodzeya asi haina mahwanda akaparadzana. Iyo haina kuchena kwamuri. 7 Uyewo nguruve,+ nokuti ine mahwanda akaparadzana uye ine mahwanda akatsemuka pakati, asi haidzeyi. Iyo haina kuchena kwamuri. 8 Hamufaniri kudya chero nyama yazvo ipi zvayo, uye hamufaniri kubata zvitunha zvazvo.+ Izvo hazvina kuchena kwamuri.+ 9 “‘Izvi ndizvo zvamungadya pazvinhu zvose zviri mumvura:+ Zvinhu zvose zvine zvimbi nemakwande+ zviri mumvura, mumakungwa nomuhova, mungadya izvozvo. 10 Zvinhu zvose zviri mumakungwa nomuhova zvisina zvimbi nemakwande, pazvisikwa zvose zvomumvura zvinofamba zvakawanda nepamweya yose iri mumvura, zvinhu zvinosemesa kwamuri. 11 Chokwadi, ngazvive zvinhu zvinosemesa kwamuri. Hamufaniri kudya chero nyama+ yazvo ipi zvayo, munofanira kusema zvitunha zvazvo. 12 Zvinhu zvose zviri mumvura zvisina zvimbi nemakwande zvinhu zvinosemesa kwamuri. 13 “‘Izvi ndizvo zvamunofanira kusema pazvisikwa zvinobhururuka.+ Hazvifaniri kudyiwa. Izvo zvinhu zvinosemesa, zvinoti: gondo+ nehungwe negora dema, 14 ngavi tsvuku nengavi nhema+ maererano nemarudzi adzo, 15 nemakunguo+ ose maererano nemarudzi awo, 16 nemhou+ nezizi neshiri yomugungwa norukodzi maererano nemarudzi arwo, 17 nezizi duku neshambira nezizi rine nzeve refu,+ 18 nedhadha romumvura nesekwe romuromo murefu negora,+ 19 neshuramurove neshorechena maererano nemarudzi ayo nemhupupu nechiremwaremwa.+ 20 Zvisikwa zvose zvine mapapiro zvinofamba zvakawanda, zvinofamba nemakumbo ose mana zvinhu zvinosemesa kwamuri.+ 21 “‘Izvi chete ndizvo zvamungadya pazvisikwa zvose zvine mapapiro zvinofamba zvakawanda, zvinofamba nemakumbo ose mana, zviya zvine makumbo marefu anopfuura tsoka dzazvo okusvetuka nawo azvinoshandisa kusvetuka panyika. 22 Izvi ndizvo zvamungadya pakati pazvo: mhashu dzinotama-tama+ maererano nemarudzi adzo, mhashu dzinodyiwa+ maererano nemarudzi adzo, makurwe maererano nemarudzi awo, uye hwiza+ maererano nemarudzi adzo. 23 Zvimwe zvisikwa zvose zvine mapapiro zvinofamba zvakawanda zvine makumbo mana zvinhu zvinosemesa+ kwamuri. 24 Naizvozvo mungazvisvibisa neizvi. Munhu wose anobata zvitunha zvazvo achange asina kuchena kusvikira manheru.+ 25 Munhu wose anotakura zvitunha zvazvo ngaageze+ nguo dzake, uye ngaave asina kuchena kusvikira manheru. 26 “‘Mhuka dzose dzine mahwanda akaparadzana asi dzisina mahwanda akatsemuka pakati uye dzisingadzeyi, hadzina kuchena kwamuri. Munhu wose anodzibata achava asina kuchena.+ 27 Zvisikwa zvose zvinofamba netsoka dzazvo pazvisikwa zvose zvipenyu zvinofamba nemakumbo ose mana, hazvina kuchena kwamuri. Munhu wose anobata zvitunha zvazvo achava asina kuchena kusvikira manheru. 28 Munhu anotakura zvitunha+ zvazvo ngaageze nguo+ dzake, uye ngaave asina kuchena kusvikira manheru. Izvo hazvina kuchena kwamuri. 29 “‘Izvi ndizvo zvisina kuchena kwamuri pazvisikwa zvinofamba zvakawanda, zvinofamba zvakaita gurumwandira panyika:+ nhuta nembeva inosvetuka+ nedzvinyu maererano nemarudzi aro, 30 nechipfira nomupurwa negwavava nechidhambakura, nerwaivhi. 31 Izvi hazvina kuchena kwamuri pazvisikwa zvose zvinofamba zvakawanda.+ Munhu wose anozvibata kana zvakafa achava asina kuchena kusvikira manheru.+ 32 “‘Zvino chero chinhu chipi zvacho chinowirwa nechimwe chazvo pachinenge chakafa chichava chisina kuchena, chingava mudziyo wedanda+ kana nguo kana dehwe+ kana saga.+ Mudziyo wose unoshandiswa uchaiswa mumvura, uye ngauve usina kuchena kusvikira manheru, wozova wakachena. 33 Mudziyo wose wevhu+ unowirwa nechimwe chazvo, zvose zviri mauri zvichava zvisina kuchena, uye uputsei.+ 34 Zvokudya zvose zvingadyiwa zvingadonherwa nemvura inobva machiri zvichava zvisina kuchena, uye zvokunwa zvose zvinganwirwa mumudziyo upi zvawo zvichava zvisina kuchena. 35 Zvinhu zvose zvingawirwa nechimwe chezvitunha zvazvo zvichava zvisina kuchena. Ingava ovheni kana kuti mapfihwa, ngazvipwanywe. Izvo hazvina kuchena, uye zvichava zvisina kuchena kwamuri. 36 Chitubu nechidziva chemvura yakachengetwa ndizvo chete zvicharamba zvakachena, asi munhu anobata zvitunha zvazvo achava asina kuchena. 37 Kana chimwe chitunha chazvo chikawira pambeu chero ipi zvayo yechirimwa ichadyarwa, iyo yakachena. 38 Asi kana mvura ikaiswa pambeu uye chimwe chinhu pazvitunha zvazvo chakanga chawira pairi, haina kuchena kwamuri. 39 “‘Zvino kana imwe mhuka yenyu inodyiwa ikafa, munhu anobata chitunha chayo achava asina kuchena kusvikira manheru.+ 40 Anodya+ chimwe pachitunha chayo ngaageze nguo dzake, ngaave asina kuchena kusvikira manheru; uye munhu anotakura chitunha chayo ngaageze nguo dzake, uye ngaave asina kuchena kusvikira manheru. 41 Zvisikwa zvose zvinofamba zvakawanda, zvinofamba zvakaita gurumwandira panyika zvinosemesa.+ Hazvifaniri kudyiwa. 42 Chisikwa chero chipi zvacho chinofamba nedumbu+ uye chisikwa chero chipi zvacho chinofamba nemakumbo ose mana kana kuti nemakumbo mazhinji pazvisikwa zvose zvinofamba zvakawanda, zvinofamba zvakaita gurumwandira panyika, hamufaniri kuzvidya, nokuti izvo chinhu chinosemesa.+ 43 Musaita kuti mweya yenyu iitwe inosemesa nezvisikwa chero zvipi zvazvo zvinofamba zvakawanda, zvinofamba zvakaita gurumwandira, musazvisvibisa nazvo mova vasina kuchena nazvo.+ 44 Nokuti ndini Jehovha Mwari wenyu;+ munofanira kuzvinatsa uye munofanira kuva vatsvene,+ nokuti ini ndiri mutsvene.+ Naizvozvo hamufaniri kusvibisa mweya yenyu nezvisikwa chero zvipi zvazvo zvinofamba zvakawanda, zvinofamba panyika. 45 Nokuti ndini Jehovha akakubudisai munyika yeIjipiti kuti ndive Mwari wenyu;+ munofanira kuva vatsvene,+ nokuti ini ndiri mutsvene.+ 46 “‘Uyu ndiwo mutemo pamusoro pemhuka nezvisikwa zvinobhururuka nemweya yose mipenyu inofamba-famba mumvura+ uye pamusoro pemweya yose inofamba yakawanda panyika, 47 kuti musiyanise+ zvisina kuchena nezvakachena, chisikwa chipenyu chingadyiwa nechisikwa chipenyu chingasadyiwa.’”